Internet optic chiedza dziva faibha optic waya flooring chokugadza - China KepuAi Photoelectric
Achagumisa Emitting Fiber Optic
Side Glow Fiber Optic
Fiber Optic Flower
Products uye Project Videos
Fiber Optic Flower Lamp, indoor kushongedzwa Manyiminya add ...
Fiber Optic Light Source, zvivheneko, purojekita
Internet optic chiedza Star Ceiling Kit Lights Car ceilin ...
Fiber optic chiedza dziva faibha optic waya flooring ...
Fiber optic chandelier resitorendi pendant chiedza, inopisa ...
25W RGBW akatungamirira faibha optic mvura keteni mapopoma fibe ...
RGBW akatungamirira Fiber optic chiedza Star Ceiling Kit Lights
Akatungamirira internet optic nyeredzi sirin'i Kit kuti madziro uye ceilin ...
Internet optic chiedza dziva faibha optic waya flooring chokugadza
Internet muchiso: Mitsubishi
Internet dhayamita: 0.75mm * 7 tambo & 1.2mm * 14 tambo & 1.5mm * 1 tambo
Light injini: DMX 1002 / DMX 502 / DMX 1001 & 75w chiedza injini
End wakakodzera: Zvingakudetsera
An Manyiminya internet wire chinhu waya rine mumwe kana kupfuura fibers Manyiminya kuti zvinoshandiswa wokushandura chiedza. The Manyiminya faibha zvinhu zviri yemanyorero nomumwe zvinenge zvakazara epurasitiki akaturikidzana uye zviri rwokudzivirira chubhu yakakodzera kwezvakatipoteredza apo waya zvichabviswa muAtlantic.
Kazhinji, isu hunoratidza kushandisa 1.5mm * 1 waya, 0.75mm * 3 waya uye 1,2 * 14 waya nokuda diki, svikiro uye mavara makuru, pamwe 75w / 45w / DMX1002 chiedza injini.
Kana uchida kuti ashongedze kumucheto dziva, isu hunoratidza kushandisa 10mm divi sokupenya fibers uye DMX 1002 chiedza injini.
Tapota titumirei wobvunzisisa yenyu vanodhirowa uye zvinodiwa, zvino isu ndichatuma kwauri quotatio
Shenzhen Kepuai photoelectric Technology Co., Ltd ndiye aitungamirira mugadziri uye nokutengesa Internet optic uye akatungamirira chiedza enyika kubva 2008.
Tine makore akawanda ruzivo mukati bhizimisi uye nguva dzose kushanda nevamwe zvikuru nomukurumbira chiedza vagadziri uye ezvivako munyika.
With kwedu simba magadzirirwo injiniya nezvaanogona uye ruzivo tsvimbo yedu, isu tine zvinhu zvinowanikwa kugadzira zvose zvezvinhu zvedu-imba rutsoka yedu mativi 20,000 muna Longgang mudunhu Shenzhen, China, uyezve, tine mumwe proformance chitoro muna Huaqiang North nokuti nemakasitoma 'maitiro kuongorora . Our yekuzviriritira pamusoro yose kugadzira muitiro kwete chete kunoreva kuti tinogona kupa mapfupi kutungamirira nguva dziri mirairo pane vakwikwidzi edu, asi yakavhenekera hurongwa kuti yakadekara edu vatengi 'chaiwo zvinodiwa.
Saka kana uchitsvaka kukwanawo mumwe playing pamwe nyeredzi zvazviri chiedza, hwokugadza pool pamwe ruvara kuchinja magetsi, kana zvive mumwe-of-a-mhando chandelier kuti resitorendi tinogona kupa mhinduro kusangana zvaunoda.
Tiri timu muduku uye simba.
Chinangwa chedu: Kuunza yepamusoro uye kuchengeteka chiedza kuti upenyu.
Funga zvinodiwa nevatengi zvedu, vatengi uye Distributors
Budai munzvimbo kumusika uye teerera, chengetai uye kudzidza
Varidzi nyika maonero
Funga aurayiwe pamusika ose zuva
Iva insatiably kuziva
Standard Packaging: katoni bhokisi.
Kavha nokuti Chandelier: Wooden bhokisi.
1, Ko tinosarudza siyana yemashoko fibers kuti yakavenganiswa kushandiswa?
Hongu, unogona kusarudza chero muenzaniso zvakasiyana uye kuva yakavhenganiswa kushandiswa.
2, Ko tinowana ivhu?
Hongu, kugamuchira kuwana ivhu kunovhenekwa.
3, Ndingaitei gadza internet optic panze nzvimbo chiedza ndoga?
Pane mirayiridzo uye vanodhirowa achiuya nhumbi, chete kutevera nayo, nyore nyore kuisa.
Kana mibvunzo, tapota inzwa wakasununguka ini paemail panguva carrie@szkepuai.com, kana kudana pana +86 137 6034 3155.
Previous: Fiber optic chandelier resitorendi pendant chiedza, hotera pendant chiedza, vaenzi pendant chiedza
Next: Fiber Optic Lighting nokuda Garden, Park Manyiminya internet okuvimba
kushanda faibha optics
kushanda pamusoro Manyiminya faibha
motokari sirin'i chiedza
siringi internet optic
internet optic siringi
internet optic makambani
internet optic magadzirirwo
internet optic migumo
internet optic jira
internet optic Kit
internet optic chiedza
internet optic chiedza dziva
internet optic dziva chiedza
internet optic mutengo
internet optic zvigadzirwa
internet optic muzvirongwa
internet optic skylight
internet optic nyeredzi nedenga
internet optic nyeredzi chiedza
internet optic nyeredzi
faibha optic tambo
internet optic zvitengeswa
internet optic michina
internet optic muti
internet optics zvikumbiro
fiberstars dziva zviedza
internet optic sirin'i zviedza
akatungamirira optic internet chiedza
optic internet chiedza
Manyiminya internet vanoshanda
panze internet optic wire
dziva internet optic chiedza
azere internet optic Kit
kushandiswa Manyiminya faibha